ESRI Venezuela oo ay weheliso Edgar Díaz Villarroel oo loogu talagalay Twingeo Daabacii 6aad - Geofumadas
Mee, 2021 dhowr
Aan ku bilaabo, su’aal aad u fudud. Waa maxay Sirdoonka Goobtu?
Goobta Sirdoonka (LI) waxaa lagu gaaraa muuqaalka iyo falanqaynta xogta geospatial si kor loogu qaado fahamka, aqoonta, go'aan qaadashada iyo saadaasha. Ku darista lakabyada xogta, sida tirakoobka dadweynaha, taraafikada, iyo cimilada, khariidad caqli badan, ururadu waxay helaan sirdoonka goobta sida ay u fahmaan sababta ay wax uga dhacaan halka ay wax ka dhacaan. Iyada oo qayb ka ah isbeddelka dhijitaalka ah, ururro badan ayaa ku tiirsan tikniyoolajiyadda macluumaadka juqraafiyeed (GIS) si loo abuuro Goob Sirdoon.
Sidaad u aragtay qaadashada Sirdoonka Goobta shirkadaha yar yar iyo kuwa waaweyn, iyo waliba aqbalaadda heer Gobol / Dawladeed. Ansixinta Goobta Sirdoonka ee shirkadaha waawayn iyo kuwa yaryarba waxay ahayd mid aad u wanaagsan, taas oo gacan ka gaysatay baahinta GIS iyo adeegsiga dadka xirfadaha aan caadiga ahayn, annaga ahaan waa wax layaableh sida aan ula shaqeyno baananka, injineerada warshadaha, dhakhaatiirta, iwm Shaqaalaha aan hadafkeennu ahayn sidii isticmaaleyaasha hore. Qalalaasaha siyaasadeed iyo maalgashi la'aanta awgeed, Gobolka / Dowladda si wanaagsan looma soo dhaweyn.
Miyaad u maleyneysaa in inta lagu jiro aafada hadda jirta, isticmaalka, isticmaalka iyo barashada cilmiga geotechnologies uu yeeshay isbedel togan ama taban?
Geotechnologies waxay door wanaagsan oo aasaasi ah ku lahaayeen la dagaalanka fayraska, kumanaan barnaamijyo ah ayaa laga sameeyay dalal badan si ay u caawiyaan, ula socdaan oo ay u gaaraan go'aamada ugu fiican. Waxaa jira barnaamijyo sida kan ka socda Machadka Jaamacadda Johns Hopkins oo maanta leh booqashooyin gaaraya 3 bilyan. Dashboard Venezuela iyo JHU
Esri wuxuu bilaabay COVID GIS Hub, tikniyoolajiyaddan ma caawin kartaa la dagaallanka cudurrada kale ee faafa mustaqbalka?
ArcGIS HUB waa xarun kheyraad aan caadi aheyn oo laga helo dhammaan barnaamijyada hal meel isla markaana laga soo dejiyo xogta falanqaynta tooska ah, waqtigan xaadirka ah waxaa jira ficil ahaan COVID HUB oo loogu talagalay Dal kasta. iyo bulshada caafimaadka iyo cid kasta oo kale oo danaynaysa inay caawiso.
Miyaad u maleyneysaa in isticmaalka sii kordhaya ee geotechnologies uu yahay caqabad ama fursad?
Waa fursad aan shaki kujirin, in la jaleeco dhammaan macluumaadka, waxay ku siineysaa fursado falanqeyn ah oo kuu oggolaanaya inaad waxqabad badan yeelato oo caqli badan tahay tanina waxay muhiim u noqon doontaa xaqiiqadan cusub.
Miyaad tixgelinaysaa inuu jiro farqi weyn isdhexgalka teknoolojiyada juqraafiga ee Venezuela marka loo eego adduunka intiisa kale? Dhibaatada hadda jirta saameyn ma ku yeelatay hirgelinta ama horumarinta cilmiga geotechnologies?
Shaki la'aan waxaa jira farqi u dhexeeya xiisadda taagan, maalgelin la'aanta hay'adaha dowladda ayaa yeelatay saameyn aad u dhaawac badan, tusaale ahaan adeegyada bulshada (Biyaha, Korontada, Gaaska, Taleefanka, Internetka, iwm.) Waxay ka yimaadeen gobolka, ma haystaan ​​teknoolojiyad geospatial ah iyo maalin kasta oo dib u dhac ah oo dhaafta iyada oo aan la fulin fulintani dhibaatooyinku way soo ururayaan oo adeeggu ma samaynayo haddii uusan ka sii darin, dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay, (qaybinta cuntada, taleefanka gacanta, Waxbarashada, Suuqgeynta, Bangiyada, Amniga, iwm) waxay adeegsanayaan teknoolojiyadda geospatial si hufan oo waxaad la mid tahay qof walba.
Muxuu ESRI u sii wadaa sharadka Venezuela? Maxay yihiin isbahaysiyo ama wadashaqeyn midkee ayaad la imaanaysaa kuwee ayaa imanaya?
Anaga Esri Venezuela, waxaan aheyn shirkadii ugu horeysay ee Esri qeybisa meel ka baxsan Mareykanka, waxaan leenahay dhaqan weyn dalka, waxaan fulineynaa mashaariic tusaale u ah aduunka intiisa kale, waxaan leenahay bulsho aad u tiro badan oo adeegsadayaal ah oo had iyo jeer tiriya anaga iyo ka go'naashahaas iyaga ayaa na dhiirrigelinaya. Esri waxaan hubnaa inay tahay inaan sii wadno sharadka Venezuela iyo in isticmaalka GIS uu yahay waxa run ahaantii gacan ka geysan doona dhismaha mustaqbal wanaagsan.
Marka laga hadlayo xulafada iyo iskaashiga, waxaan leenahay barnaamij ganacsi oo xoogan oo dalka ka socda, kaasoo noo ogolaaday inaan ka shaqeyno suuqyada oo dhan, waxaan sii wadeynaa inaan raadsano lamaanayaal cusub meelaha kale ee gaarka ah. Dhawaan waxay qabteen "Madasha Cilmiga iyo teknolojiyada". Ma noo sheegi kartaa maxay tahay Smart City, ma waxay la mid tahay magaalo dijitaal ah? Maxaad u malaynaysaa inay Caracas ka maarmi lahayd - tusaale ahaan - inay noqoto Magaalo Casri ah
Magaalada Smart waa magaalo wax ku ool ah, waxay loola jeedaa nooc ka mid ah horumarinta magaalooyinka oo ku saleysan horumar waara oo awood u leh inay si ku filan uga jawaabto baahiyaha aasaasiga ah ee hay'adaha, shirkadaha, iyo dadka deegaanka laftooda, dhaqaale ahaan, sida howl ahaan, bulsho ahaan iyo dhinacyada deegaanka. Maaha isku mid in magaalo Dijital ahi ay tahay isbeddelka Magaalada Dijital ah, waa tillaabada xigta, Caracas waa Magaalo leh 5 badhasaab oo kuwaas ka mid ah waxaa jira 4 oo horeba ugu sii socday inay noqdaan Magaalo Smart ah oo aan sii wadno ku hag iyaga Qorshaynta, Dhaqdhaqaaqa, Falanqaynta iyo maaraynta xogta iyo tan ugu muhiimsan ee la xidhiidha muwaadiniinta. ArcGIS Hub Venezuela
Maxay tahay, sida ku saleysan shuruudahaaga, waa geotechnologies-ka lagama maarmaanka u ah in lagu gaaro isbeddel dijitaal ah oo magaalooyinka ah? Maxay yihiin faa'iidooyinka ay tikniyoolajiyadda ESRI si gaar ah u bixiyaan si loo gaaro tan?
Aniga ahaan, wax muhiim u ah in lagu guuleysto isbedelka Dijital ah waa in la helo diiwaan dijitaal ah oo laga heli karo meel kasta, waqti iyo qalab, diiwaankaan dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah waxaa lagu soo qaadi doonaa Gaadiidka, Dembiyada, Qashinka adag, Dhaqaalaha, Caafimaadka, Qorshaynta, Dhacdooyinka, iwm. Macluumaadkan waxaa lala wadaagi doonaa muwaadiniinta waxayna noqon doonaan kuwo aad xasaasi u ah haddii aysan ahayn mid casriyeysan oo tayo wanaagsan leh. Taasi waxay kaa caawin doontaa go'aan qaadashada waqtiga dhabta ah iyo xallinta dhibaatooyinka bulshada. Anagu Esri ahaan waxaan ku leenahay qalab gaar ah mid kasta oo ka mid ah wejiyada si loo gaaro hadafka isbedelka dhijitaalka ah.
Kacaankan warshadeed ee 4-aad, kaas oo keenaya ujeeddada ah in la dhiso xiriir guud oo u dhexeeya magaalooyinka (Smart City), qaabaynta qaab-dhismeedka (Mataanaha Dijital ah) iyo waxyaabo kale, sidee ayuu GIS u soo galayaa isagoo ah aalad maareynta xogta awood leh? Kuwo badan waxay u maleynayaan in BIM uu yahay midka ugu habboon ee howlaha la xiriira tan.
Waa hagaag Esri iyo Autodesk waxay go'aansadeen inay iskaashadaan si ay tan uga dhigaan mid dhab ah GIS iyo BIM ayaa si buuxda isula jaanqaadi kara waqtigan, waxaan ku dhex leenahay xalalkeena ku xirnaanshaha lafaha BIM iyo macluumaadka oo dhan waxaa lagu shubi karaa barnaamijyadeenna, waxa adeegsadayaashu filayaan waa xaqiiqo haysasho dhammaan macluumaadka iyo falanqaynta jawi keliya ayaa suurtagal ah maanta ArcGIS.
Miyaad u maleyneysaa in ESRI ay si sax ah u wajahday isdhexgalka GIS + BIM?
Haa, waxay ila tahay aniga maalin walba iskuxirayaasha cusub ee udhaxeeya tikniyoolajiyadda, waxaan kula yaaban nahay qaab aad u wanaagsan falanqaynta la fulin karo. Sidaad u aragtay isbeddelka xagga adeegsiga dareemayaasha ee qabashada xogta geospatial. Waxaan ognahay in qalabka mobilada shaqsiyadeed ay had iyo jeer soo diraan macluumaad laxiriira goob. Waa maxay muhiimada ay leedahay xogta aan nafteena soo saarayno, waa seef laba af leh?
Dhammaan xogta lagu soo saaray dareemayaashaan waa kuwo aad u xiiso badan, taas oo noo ogolaaneysa inaan falanqeyno macluumaad badan oo ku saabsan tamarta, gaadiidka, abaabulka kheyraadka, sirdoonka farsamada, saadaasha duruufaha, iwm. Had iyo jeer shaki ayaa jira haddii macluumaadkan si khaldan loo adeegsado waxyeelo ayuu keeni karaa, laakiin hubaal waxaa jira faa iidooyin dheeri ah oo magaalada loo helayo iyo in laga dhigo mid lagu noolaan karo dhammaanteen inta ku dhex nool.
Hababka iyo farsamooyinka helitaanka xogta iyo soo qabashada waxaa hadda lagu hagaajinayaa helitaanka macluumaadka waqtiga dhabta ah, hirgelinta adeegsiga dareemayaal fog sida drones, oo uu rumeysan yahay inay ku dhici karto isticmaalka dareemayaasha sida dayax gacmeedyada indhaha iyo raadaarka, isagoo ogsoon in macluumaadku ma aha mid deg deg ah.
Macluumaadka waqtiga-dhabta ah waa wax ay dhammaan adeegsadayaashu rabaan waxayna u dhowdahay soo bandhigid kasta oo ah su'aal waajib ah oo qof go'aansado inuu waydiiyo, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa wax badan ka caawiyey gaabinta waqtiyadan waxaanan haysannaa, tusaale ahaan, natiijooyin aad u wanaagsan oo aan ku cusbooneysiin karno iyo moodooyinka kor u qaadista, laakiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa wali leh xadidaad duulimaadka iyo arrimo kale oo farsamo oo sameeya dayax gacmeedyada iyo raadaarka wali waa xulasho wanaagsan noocyada shaqada qaarkood. Isku-dhaf u dhexeeya labada teknoolojiyad ayaa habboon. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira mashruuc horey usocda dayax gacmeedyo joog hoose ku socda oo dhulka lagula socdo waqtiga dhabta ah iyadoo la adeegsanayo sirdoon farsameysan. Taas oo muujineysa in dayax gacmeedyadu leeyihiin waqti dheer oo la isticmaalo.
Waa maxay isbeddelada teknoolojiyadda ee la xiriira cilmiga geospatial-ka ee hadda isticmaalaya magaalooyin waaweyn Sidee iyo xaggee ayay tahay in tallaabada laga bilaabo in la gaaro heerkaas?
Ku dhowaad dhammaan magaalooyinka waaweyn waxay horey u leeyihiin GIS, tani runti waa bilow, in la helo cadastre heer sare ah oo leh dhammaan lakabyada lagama maarmaanka u ah Kaabayaasha Xogta Spatial (IDE) ee wada shaqeynta ka dhexeysa waaxyaha kala duwan ee ku wada nool magaalo ay waax kastaaba tahay Layer. milkiilaha kaas oo mas'uul ka ah inuu cusbooneysiiyo, tani waxay gacan ka geysan doontaa Falanqaynta, Qorshaynta iyo xiriirka muwaadiniinta.
Aynu ka hadalno Academia GIS Venezuela, si wanaagsan ma loo soo dhoweeyey? Waa maxay khadadka cilmi-baarista ee ay tacliinta bixisaa?
Haa, hadaanu nahay Esri Venezuela aad ayaanu ula dhacsanahay soo dhaweyntayada Akadamiyadda GISWaxaan haysannaa dhowr koorso toddobaadle ah, kuwo badan oo isqortay, waxaan bixinnaa dhammaan koorsooyinka rasmiga ah ee Esri, laakiin intaa waxaa sii dheer waxaan abuurnay dalab koorsooyin shaqsiyeed oo ku saabsan Geomarketing, Deegaanka, Batroolka, Geodesign iyo Cadastre. Waxaan sidoo kale ka abuurnay takhasusyo isla meelahaas oo horey u lahaa dhowr maxkamadood oo qalin jabiya. Waxaan hadda ku haynaa koorso cusub oo ku saabsan sheyga ArcGIS Urban oo gebi ahaanba ku qoran Isbaanish iyo Ingiriis oo lagu abuuray gebi ahaanba Esri Venezuela waxaana loo isticmaalaa in lagu tababaro qeybiyeyaasha kale ee Latin America. Qiimaheenu runtii waa kuwo aad u taageera.
Miyaad tixgelinaysaa in deeqda waxbarasho ee loogu talagalay tababbarka xirfadlaha GIS ee Venezuela ay waafaqsan tahay xaqiiqda hadda jirta?
Haa, baahida weyn ee aan qabno ayaa cadeyneysa, Koorsooyinkayaga waxaa loo sameeyay iyadoo loo eegayo waxa loo baahan yahay waqtigan Venezuela, takhasusyada waxaa loo abuuray iyadoo loo eegayo baahida shaqada ee dalka, dhammaan kuwa dhammeeya takhasusyada isla markiiba waa la shaqaalaysiiyaa ama hela shaqo fiican.
Miyaad u maleyneysaa in baahida loo qabo xirfadlayaal si dhow ula xiriira maareynta xogta meelaha ay aad u sarreeyso mustaqbalka dhow?
Haa, taasi waa xaqiiqo jirta maanta, keydadka macluumaadka ayaa muhiimad gaar ah leh maalin kasta halka ay ka dhacday ama halka ay ku taal taasna waxay noo oggolaaneysaa inaan noqonno mid waxtar badan oo caqli badan, khubaro cusub ayaa la abuurayaa, saynisyahannada xogta (Sayniska xogta) iyo Falanqeeyayaasha (Falanqeeyaha Meelaha) waxaanan hubaa in mustaqbalka la abuuri doono macluumaad aad u badan oo ka iman doona juquraafi ahaan asal ahaan iyo dad badan oo takhasus u leh ayaa loo baahan doonaa si ay ula shaqeeyaan macluumaadkaas
Maxaad u malaynaysaa tartanka joogtada ah ee u dhexeeya tikniyoolajiyadaha GIS bilaashka ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Waxaan u maleynayaa in tartanku yahay mid caafimaad qaba maxaa yeelay taasi waxay naga dhigeysaa inaan dadaalno, hagaajino oo aan sii wadno abuurista alaabooyinka ugu tayada sareeya. Esri wuxuu u hoggaansamayaa dhammaan heerarka OGC, Bixinta wax soo saarkeena waxaa jira ilo badan oo furan iyo xog furan
Maxay yihiin caqabadaha mustaqbalka ka dhex jira dunida GIS? Maxayse ahayd isbeddelka ugu muhiimsan ee aad aragtay tan iyo markii la aasaasay?
Shaki la'aan, waxaa jira Caqabado ay tahay inaan sii wadno horumarinta, Waqtiga dhabta ah, Sirdoonka Artificial, 3D, Sawirada iyo Wadashaqeynta ururada. Isbedelka ugu weyn ee aan arkay wuxuu ahaa isku duubnaanta isticmaalka barnaamijka ArcGIS ee dhammaan warshadaha, meel kasta, aalad iyo waqti kasta, waxaan ahayn barnaamij softiweer ah oo yaqaanay sida loo isticmaalo kaliya shaqaalaha takhasuska leh, maanta waxaa jira barnaamijyo qof walba wax ka qaban karo iyadoon lahayn nooc tababar ama aqoon hore ah.
Miyaad u maleyneysaa in xogta goobta si sahal ah loo heli karo mustaqbalka? Iyadoo la tixgelinayo in tani ay dhacdo waa inay maraan habab badan
Haa, waxaan ku qanacsanahay in xogta mustaqbalka ay furan tahay oo si fudud loo heli karo. Taasi waxay gacan ka geysan doontaa kobcinta xogta, cusbooneysiinta iyo wada shaqeynta dadka. Sirdoonka macmalka ah ayaa wax badan ka caawin doona fududeynta nidaamyadan, mustaqbalka xogta baaxada leh waxay noqon doontaa mid aad u cajaa'ib badan shaki la'aan.
Waxaad nooga sheegi kartaa qaar ka mid ah gaashaanbuurta sii socon doonta sanadkan iyo kuwa cusub oo soo socda.
Esri wuxuu sii wadi doonaa inuu ku koro bulshada dhexdeeda shuraakada ganacsiga iyo la shaqeynta jaamacadaha taas oo naga caawin doonta abuurista bulsho xoogan oo GIS ah, sanadkan waxaan la xulafayn doonaa ururo dhinacyo badan leh, ururo mas'uul ka ah gargaarka bani'aadamnimada iyo ururada dhinaca hore jooga khad ka caawinaya sidii looga hor tagi lahaa CUDURKA-19 faafa.
Wixii kale ee aan jeclaan lahaa inaan ku daro
Esri Venezuela waxaan haysanaa sanado qorshe ah oo aan ku caawineyno Jaamacadaha, waxaan ugu yeernaa mashruucan Smart Campus kaas oo aan hubno inaan ku xallin karno dhibaatooyinka ka jira gudaha xerada oo aad ugu eg dhibaatooyinka magaalada. Mashruucani wuxuu horey u leeyahay 4 mashruuc oo dhameystiran Jaamacadda Dhexe ee Venezuela, Jaamacadda Simón Bolívar, Jaamacadda Zulia iyo Jaamacadda Metropolitan. Xarunta UCV, UCV 3D, Xarunta Smart USB
Wareysigan iyo kuwa kaleba waxaa lagu daabacay Daabacaadii 6aad ee Majaladda Twingeo. Twingeo waxay awood buuxda u leedahay inay hesho maqaallada la xiriira Geoengineering daabacaaddeeda soo socota, nala soo xiriir adoo adeegsanaya emayllada ed edge edumadas.com iyo editor@geoingenieria.com. Ilaa daabacaadda soo socota.
Post Previous" Hore Robotics macquul ah oo waalan
Post Next GANACSIGA UAV EXPO AMERICASNext »